ဘူးသီးတောင်ရှိ နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းစခန်းကို AA အဖွဲ့မှ လာရောက်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက် - Yangon Media Group
ဘူးသီးတောင်ရှိ နယ်ခြားစောင့် ရဲကင်းစခန်းကို AA အဖွဲ့မှ လာရောက်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး AA အလောင်းတစ်လောင်း ရရှိခဲ့ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၆
ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်ခြား စောင့်ရဲကင်းစခန်းကို AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ လာရောက်နှောင့် ယှက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး AA အလောင်း တစ်လောင်းရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ညောင်ချောင်း ကျေးရွာ၊ ညောင်ချောင်း နယ်ခြား စောင့်ရဲကင်းစခန်းသို့ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်၊ နံနက် ၄ နာရီခန့်က ဗဗ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အင်အား ၇ဝ ခန့်လာရောက်ကာ နှောင့်ယှက် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း တပ် မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာ တစ်နာရီခန့်ကြာပြီးနောက် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့သဖြင့် လိုက်လံရှင်းလင်းခဲ့ ကြောင်း ၎င်းင်းကပြောသည်။ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ အလောင်းတစ် လောင်းနှင့် လက်နက်အချို့ရရှိခဲ့ ကြောင်း ၎င်းင်းကဆက်လက်ပြော သည်။
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ”နံနက် ၄ နာရီနဲ့ ၅ နာရီကြားမှာ ရသေ့တောင်နဲ့ဘူးသီးတောင် ကြားထဲမှာရှိတဲ့ ညောင်ချောင်းရဲကင်း စခန်းကို AA အင်အား ၇ဝ လောက် လာရောက်နှောင့်ယှက်ပစ်ခတ်တယ်။ ညောင်ချောင်းရွာဘက်က နေလာပစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ရဲနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်။ AA ဘက်က အလောင်းတစ်လောင်းရတယ်။ လက်နက်အချို့ ရလိုက်တယ်။ သူတို့ ဆုတ်ခွာသွားတဲ့ချိန် မှာ ဘင်္ဂါလီကျေးရွာတွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီဘင်္ဂါလီကျေးရွာတွေကို ပစ်ခတ်သွားတာကြောင့်မို့ ဘင်္ဂါလီအချို့လည်း ဒဏ်ရာရသွားတယ်” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေး၏ မေးမြန်း မှုကို ဖြေကြားသည်။
ဗဗ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဆောင် ရွက်ပေးနေသည့် ရဲကင်းစခန်းများကို တိုက်ခိုက်မှုမှာ ယခုနှစ်တွင် လေးကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။ ”တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲကင်းစခန်းတွေကို တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့ အတွက် ဒါဟာအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်တာပဲ”ဟု ၎င်းင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
တိုက်ခိုက်ခံရသည့် ရဲကင်းသို့ တပ်မတော်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့လုံခြုံ ရေးတပ်ဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာကာ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက် နေကြောင်း သိရသည်။ ယခုနှစ်မတ် ၉ ရက် ညပိုင်းကလည်း ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ယိုးတရုပ်ကျေးရွာ အရှေ့ဘက်ရှိ ယိုးတရုပ်ရဲကင်းစခန်းအား AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အင်အား ၁ဝဝ ခန့်မှ ရဲစခန်း၏အရှေ့၊ အနောက်၊ ယာဘက်မျက်နှာစာ သုံးဖက်မှသာလွန်အင်အား အသုံးပြုကာလက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များ ဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ကိုးဦးကျဆုံးခဲ့ရသည်။
ယင်းမတိုင်မီ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် (လွတ်လပ်ရေးနေ့)ကလည်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ရှိ ရဲကင်း စခန်းလေးခုကို AA မှ တစ်ပြိုင် နက် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးကျဆုံးပြီး ကိုးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့သေးသည်။
ရေဘေးကြောင့် တိုင်းနှင့်် ပြည်နယ်လေးခုရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း (၄ဝ)ကျော်တွင် လူဦးရေလေးသောင်းကျော် ခိုလှုံနေဆဲဖြစ်
စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့် တရုတ်နိုင်ငံသား လသာရွှေဆိုင် တစ်ဆိုင်တွင် ဝင်ရောက်သောင်းကျန်း
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက အလုပ်ပေးမည်ဟု ကမ်းလှမ်းသော်လည်း ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှ ချီတက်လာသော လူအုပ်ကြီး အ??
တောင်ပြုန်းပွဲတော် အကြို ကျင်းပမည့် အိုးပုတ်ပွဲ၌ ရောင်းချမည့် အိုးပုတ်များကို နွယ်ငြိမ်း ??
ကီပါ၏ဖြစ်ရပ်ကြောင့် စုစည်းမှုပိုရှိလာကြောင်း ဆာရီပြောကြား
ပုဂံဒေသရှိ အဆောက်အအုံများ ပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စ တိကျစွာ မပြောနိုင်သေးဟု မန်းတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည့် စစ်ဘေးရှောင်များကို ထိုင်းပညာရှင်များက ဩဂဲနစ်သ??